नेकपा एमालेको मतादान सकियो, २ हजार एकसय मत खसेको अनुमान - Tribune Nepal News
वीरगन्ज, १४ मंसिर । नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि चितवनमा भईरहेको मतदानको समय सकिएको छ । आज बिहान १० बजेसम्म मतदानको कार्यतालिका रहेको थियो । तर, निर्धारित समयमा मतदान नसकिने भएपछि आधा घण्टा थप गरिएको थियो ।
थपिएको समयमा मतदान सम्पन्न भएको हो । मतदानको समय सम्पन्न भएको अवस्थासम्म २०७९ मत खसेको छ । बाँकी मतदान स्थलमा केही प्रतिनिधिहरुले मत खसाल्न बाँकी रहेको बताईएको छ । कूल मतदाता संख्या २१५३ जना मध्य अहिलेसम्म २०७९ मतदान भईसकेको छ ।
अन्तिम मतदान केहीबेरमा सकिने नेकपा एमालेका सचिवका उम्मेदवार योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । डेढदुई घण्टामा मत परिणाम आउने सम्भावना छ । यो सँगै एमालको महाधिवेशनमा २ हजार एकसय मत खस्ने अनुमान गरिएको छ ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सदस्य बाबुराम दाहालले बताउनुभयो । गएराति नै मतदान सुरु गर्ने भनिएपनि ढिला गरी आज बिहानबाट मात्र मतदान सुरु भएको हो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यका केही क्लस्टरमा आज मतदान भइरहेको छ ।
ट्रिब्यून न्युज Nov 1, 202103
सात मन्त्रीको पद, सर्वोच्चद्वारा चट
ट्रिब्यून न्युज May 20, 2021010
ट्रिब्यून न्युज Mar 8, 202105
नेकपा एमालेको वडा नं. ९ को वडा भेला सम्पन्न
दुई तिहाईको सरकारदेखि बहुमत र अल्पमतसम्म ..........!
ट्रिब्यून न्युज May 25, 2021068
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी पर्साको विवाद सुल्झियो
ट्रिब्यून न्युज Sep 22, 20210143
ट्रिब्यून न्युज Dec 20, 202100